Akụkọ Ndụ: Jehova ‘Na-eburu M Ibu M Kwa Ụbọchị’ | Nke A Na-amụ Amụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
N’agbanyeghị na m na-arịa ụdị ọrịa dị iche iche m chere na mụ agaghị edili, Nna m nke eluigwe na-enyere m aka kemgbe a mụrụ m. Kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ, obi dị m ezigbo ụtọ na m bụ ọsụ ụzọ.
A mụrụ m n’afọ 1956. Mgbe a mụrụ m, a chọpụtara na e nwere oghere n’ọkpụkpụ azụ m. O meziri ka ịga ije na-ara m ahụ́, meekwa ka m na-arịa ọrịa ndị ọzọ.
Tupu a mụọ m, ndị ozi ala ọzọ bụ́ Ndịàmà Jehova malitere ịmụrụ papa m na mama m Baịbụl. Mgbe m bụ nwata, e nwere naanị ndị nkwusa ole na ole n’obodo anyị bụ́ Usakos, dị na Namibia. E nwebeghị ọgbakọ n’ebe ahụ mgbe ahụ. N’ihi ya, anyị na-atụle ihe ndị e kwesịrị ịmụ n’ọmụmụ ihe ọgbakọ n’ezinụlọ anyị. Mgbe m dị afọ asaa, a wara m ahụ́ tinye ebe m ga-esi na-anyụ mamịrị. Mgbe m dị afọ iri na anọ, arịawara m akwụkwụ. Agarughị m ụlọ akwụkwọ sekọndịrị n’isi n’ihi na ọ dị anya n’ebe anyị bi. Ihe ọzọ kpatara ya bụ na mama m na papa m kwesịrị ịna-elekọta m mgbe niile.
Ma, m kpebiri na m ga-eme ka mụ na Jehova dịkwuo ná mma. Asụsụ anyị bụ Afrịkans. Ma, ọtụtụ akwụkwọ anyị adịbeghị n’asụsụ anyị mgbe ahụ. N’ihi ya, m mụrụ otú e si agụ Bekee ka m nwee ike ịna-agụ ọtụtụ akwụkwọ a na-ebipụtara anyị. Aghọrọ m onye nkwusa, e meekwa m baptizim mgbe m dị afọ iri na itoolu. Malite mgbe ahụ ruo afọ anọ ọzọ, arịara m ụdị ọrịa dị iche iche. Obi anaghịkwa adị m mma. Ihe ọzọ bụ na egwu mmadụ mere ka m ghara ịna-agachi ozi ọma anya n’obodo anyị, n’ihi na mmadụ niile na-emekọ ihe ọnụ ka ụmụnne.
Mgbe m dị ihe dị ka iri afọ abụọ na atọ, anyị si Namibịa kwaga Saụt Afrịka. Ebe ahụ bụ ebe mbụ m so ọgbakọ mụọ ihe. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ mgbe ahụ. Ma, e mechara waa m ahụ́ ọzọ tinye ebe m ga-esi na-anyụ nsị.
N’oge na-adịghị anya, egere m okwu otu onye nlekọta sekit kwuru gbasara ịsụ ụzọ. Ihe o kwuru ruru m n’obi. M ma na ọrịa m na-arịa ga-eme ka ịsụ ụzọ siere m ike, ma echetara m otú Jehova si na-enyere m aka n’ọtụtụ nsogbu ndị bịaara m. Etinyere m akwụkwọ ka m bụrụ ọsụ ụzọ oge niile. Ma, ndị okenye ekweghị abịanye aka n’akwụkwọ ahụ n’ihi ọrịa m na-arịa.
Ma, ekpebiri m iji ike m niile na-ekwusa ozi ọma. N’ihi otú mama m na ụmụnna ndị ọzọ si nyere m aka, ejisiri m ike nye awa ole ndị ọsụ ụzọ na-enye. M nyere awa ole ahụ ruo ọnwa isii. Ihe ahụ m mere gosiri na m kpebisiri ike ịsụ ụzọ oge niile, gosikwa na m ga-asụli ụzọ n’agbanyeghị ọrịa m na-arịa. N’ihi ya, mgbe m tinyere akwụkwọ ọzọ, ndị okenye bịanyere aka na ya. Aghọrọ m ọsụ ụzọ oge niile n’abalị mbụ n’ọnwa Septemba, n’afọ 1988.
Kemgbe m na-asụ ụzọ, Jehova ahapụbeghị m. Kama ịnọ na-echegbu onwe m maka ọrịa m na-arịa, eji m oge m na-akụziri ndị ọzọ eziokwu dị na Baịbụl. O meela ka obi na-adị m mma, mee ka m mụta ọtụtụ ihe, meekwa ka mụ na Chineke dịkwuo ná mma. Obi dị m ụtọ na enyerela m ọtụtụ ndị aka, ha enyefee Jehova onwe ha, e meekwa ha baptizim.
Mụ na ọrịa ka na-alụ. Ma, Jehova ‘na-eburu m ibu m kwa ụbọchị.’ (Ọma 68:19) Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka m na-edi nsogbu ndị na-abịara m, ọ na-emekwa ka obi na-adị m ụtọ na m dị ndụ.